Izinsolo ezingezinhle ngomsakazi woKhozi | News24
Izinsolo ezingezinhle ngomsakazi woKhozi
Sandile Makhoba, ILanga
Durban - Kuqubuka izinsolo ezingezinhle mayelana nomcimbi obuwenzelwe ukubongela isihlabani sikamasikandi esihlukanise unyaka ngengoma yaso ethi Elamanqamu, uSthembiso Mroza Fakude, kwazise kuthiwa izikhulu zoKhozi FM zibhecwe ngobende inyama zingayidlanga njengoba kubikwe ukuthi zichayise lo mculi ngesikhathi lesi sikhondlakhondla somsakazo singayi kuwona, kubika iphephandaba ILANGA.
Kuvela ukuthi lo mcimbi obungoMgqibelo eSibhojeni KwaHlabisa, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal, ubuhlelwe ngumsakazi woKhozi FM, uNgizwe Mchunu, ngokubambisana nenkampani ephethe uMroza, iMabala Noise kaReggie "Governor" Nkabinde - isiteshi besingahlangene nhlobo nawo - futhi indaba yokuthi lo msakazo ubuzosakaza bukhona kuwona, bekumane kusengwa ezimithiyo nje.
Umthombo weLANGA uthi uNgizwe uke wabonakala ephithizela kubo kaMroza phakathi nesonto, ngaphambi kokuba kwenziwe lo mcimbi kanti nalo leli phephandaba limbonile ngesikhathi livakashele khona.
Kuvela lezi zinsolo nje, kusuke omkhulu umsindo kusolwa uKhozi ngokuthi luchayise uMroza - lungasayi emcimbini wakhe.
Leli phephandaba lithole ngemithombo yalo ethembekile ukuthi empeleni indaba yokuthi uKhozi luchayise uMroza, ivutshelwe ngamabomu ngabathile ngaphakathi kulesi siteshi ukuze sibukwe kabi kwazise bese bazi ukuthi kaluyi emcimbini ngenxa yemigomo okumele ilandelwe.
Umthombo uthi uNgizwe nabanye abasakazi balwazi kahle uhlelo lomsakazo ukuthi luhamba kanjani, njengoba bekusanda kuvulwa izikole nje uKhozi beluqhakambisa ukubuyela kwabafundi esikoleni - okuyinto oluhlale luyenza njengoba lwenza nangezinye izinyanga uma kunomkhankaso othile ophushwayo.
Umthombo uqhuba uthi izikhulu zalo msakazo zijabhile uma sekuzwakala ukuthi wona futhi obuhamba phambili ekwesekeni uMroza - aze aphumelele ekwehlukaniseni unyaka - sekuthiwa umchayisile kwazise ngisho nezinye izikhulu eziphezulu zimvotelile ukuze anqobe.
OLUNYE UDABA: Umlingisi useyishiye phansi iGenerations: The Legacy
Kuthiwa kukhona esicwebe izinyembezi sijatshuliswa wukuthi ingoma kamasikandi ihlukanise unyaka naso siyingxenye yoKhozi FM.
Umthombo uthi kunabathile - ngaphakathi oKhozini nakwiMabala - abebephansi phezulu behlebela abezindaba benzela ukuneka izikhulu zoKhozi njengabantu abangafuni ukweseka lo mcimbi.
Imithombo yeLANGA ithi kakusiwona nje kuphela lo mcimbi ohlanganisa uNgizwe neMabala Noise.
"UNgizwe uyasebenzisana neMabala, ngesonto eledlule ubetatazela nayo ehlela umcimbi kaMroza kunjalo nje usefuna ukukhipha inkosikazi yakhe (uFloda oculayo) esitebeleni sikaDJ Tira, i-Afrotainment ayifake eMabala Noise," kulanda umthombo.
Eshayelwa uNgizwe, ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa, kwale noma esethunyelelwe umqhafazo lutho ukuphendula. Kuze kwashaya isikhathi sokuloba engabuyelanga kuleli phephandaba.
UFloda ebuzwa mayelana nezinsolo zokuthi angase awele nesihlalo - asuswe e-Afrotainment ayiswe eMabala Noise - akavumanga futhi akaphikanga, uthe ucela ukuba abuye athintwe ukuze ezonaba kahle futhi usazoqala akhulume noNgizwe athe ukhona eduze kwakhe kodwa usematasa kolunye ucingo futhi uma beqeda lapho bazongena emhlanganweni othile.
Uthe makathintwe emuva kwehora ukuze anabe kahle, nokho kuthe uma esethintwa ucingo lwakhe belukhala kanye luthule.
UMnu Kaizer Kganyago okhulumela iSouth African Broadcast Corporation (SABC), uthe kasikho isivumelwano esihoxiswe wuKhozi phakathi kwalo neMabala Noise, empeleni kakukaze kube khona sivumelwano phakathi kwabo.
"Umuntu othi uKhozi luhoxise isivumelwano makeze naso, engasho into abezixoxela yona nabangani bakhe bese ethi yisivumelwano. Isivumelwano kumele sibhalwe phansi singaxoxwa ngomlomo," kusho uMnu Kganyago.
Uthe ukudlala kwesikhangiso emsakazweni kungabadidi abantu ngoba izikhangiso ziyakhokhelwa.
Ebuzwa ngokuphenywa kukaNgizwe mayelana nokumataniswa kwakhe neMabala, uthe: "Wonke umuntu uvumelekile ukuya emcimbini ngakho-ke uNgizwe ngeke aphenyelwe ukuthi ubehambele umcimbi."
UMhlo Gumede okhulumela iMabala Noise, uthe kabasebenzisani noNgizwe futhi ubengeyona ingxenye yomcimbi kaMroza, ubekhona nje ngoba engumuntu kamaskandi.
"Kasikaze sihlale ngisho emhlanganweni owodwa noNgizwe, ngakho-ke ngingakusho ngingananazi ukuthi kasisebenzisani naye kodwa siyazifuna iziyalo kuyena njengomuntu owazi umaskandi,” uMhlo.